September 2, 2021 admin2LeaveaComment on पोखरामा घट्यो अत्यतै दुखदायी घट्ना
पोखरामा घट्यो अत्यतै दुखदायी घट्न अविरल वर्षाका कारण पहिरामा परेर पोखरामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । पहिरामा एक बालक बेपत्ता हुनाका साथै चार जना घाइते भएका छन् । लगातारको वर्षापछि गए राति आएको पहिराले घर पुरिँदा पोखरा महानगरपालिका–२० भलाममा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा घरधनी ४५ वर्षका कृष्ण […]
September 2, 2021 September 2, 2021 admin2LeaveaComment on नायिका बर्षा सिवाकोटीले किनिन् काठमाडौंमा यति महंगो घर
नायिका बर्षा सिवाकोटीले किनिन् काठमाडौंमा यति महंगो घ नायिका वर्षा सिवाकोटीले अपार्टमेन्ट किनेकी छिन् । प्राप्त जानकारी अनुसार बर्षाले हात्तीवनमा रहेको सिटी स्केप्टमा थ्रि बीएचके अपार्टमेन्ट साढे २ करोडमा खरिद गरेकी हुन् । आफ्नी आमाको सहयोगमा अपार्टमेन्ट खरिद गरेको बर्षाले बताएकी छिन् । अपार्टमेन्टमा बर्षा र उनकी आमा बस्नेछन् । सोमबार पूजाआजा गरेर आमा […]
September 2, 2021 admin2LeaveaComment on मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डका रुपमा कार्यरत एक नेपाली युवकको मृत्यु
मलेसियामा सेक्युरिटी गार्डका रुपमा कार्यरत एक नेपाली युवकको मृत्यु यहाँ घर भएका एक नेपालीको बुधबार मलेसियामा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–४ श्रीकेदारका ३३ वर्षीय गोपालसिंह विष्ट रहेका छन् । सेक्युरिटी गार्डका रुपमा कार्यरत रहेका विष्टको ड्युटीमा खटिएकै बेला मृत्यु भएको त्यहाँबाट दिनेश खड्काले जानकारी दिनुभयो । कावालान केशलामातान अनुग्रह सेक्युरिटी […]
महामारीमा विद्यालय कसरी खोल्ने ? यस्तो छ सीसीएमसीको निर्देशन. महामारीका कारण लगभग डेढ वर्षदेखि भौतिक रुपमा विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन अवरुद्ध हुदै आएको छ । विद्यालय र कलेजहरू बन्द भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरुमा त परेको छ नै, निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुको रोजगारीमा समेत असर परेको छ । शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक तथा लगानीकर्तासमेत ऋणमा […]
निशाको मृत्यु नहुँदै गरिएको त्यो पत्रकार सम्मेल कलाकार निशा घिमिरेको मृत्यु भएको छ । विगत तीन महिनादेखि काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत उनको बुधबार साँझ मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । मंगलवार मात्र नर्भिक अस्पतालले सबै प्रयासका बाबजुद पनि उनको स्वास्थ्य अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएको थियो । पछिल्लो समय उनको मुटु र […]
September 2, 2021 admin2LeaveaComment on आफ्नो यौन इच्छा पुरा गर्न पति शारीरिक रूपमा कमजोर भएको भन्दै यी महिलाले ……
काठमाडौं । सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि धेरै कुराहरु हुन सक्छन् । अहिले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु वा जोड्ने कुरा एकदम सहज हुँदै गएको छ । तर नेपालजस्ता पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरुले आफ्नो श्रीमान छोड्न धेरै गाह्रो छ । यो बीचमा अब महिलाहरु पनि खुलेर बोलिरहेका छन् । केहि वर्ष पहिले गरिएको एक […]
September 2, 2021 admin2LeaveaComment on भुजीखोला बाढीको एक वर्षः वेपत्ता भएका १५ जना अझै भेटिएनन्
बलेवा । केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो । भुजी खोलामा वर्षापछिको बाढीले सुसेली हालेको भए पनि घरमै पसेर विध्वंश मच्याउला भनेर कसैले सोचेनन् । खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो । अघिल्ला वर्षमा पनि खोला यसै गरी सुसाउँथ्यो र अहिले पनि उसै गरिरहेको छ । बाउ बाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला […]
पोखराको भलाम र रामबजारमा पहिरोले घर पुरिँदा ३ जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता पोखरा । पोखरामा लगातार परेको भारी वर्षाका कारण पहिरोले घर पुरिँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाले पहिरो जाँदा पोखरा–१० रामबजारस्थित नमुना टोलमा ब्लकको घर पहिरोले भ त्किँदा ४२ वर्षीया लक्ष्मी नेपालीको मृत्यु भएको हो । […]
September 2, 2021 admin2LeaveaComment on त्रिभुवन विमानस्थलबाट २३ वर्षीय विशाल पक्राउ ! यो उमेरमै गरेछन बिश्वासनै नलाग्ने यस्तो काम
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २३ वर्षीय विशाल पक्राउ ! यो उमेरमै गरेछन बिश्वासनै नलाग्ने यस्तो काम बैङ्किङ्ग कसुरको आरोपमा महानगरीय अपराध महाशाखाबाट खटिएको प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ईलामको सूर्योदय नगरपालिका घर भएका २३ वर्षीय विशाल रेग्मी छन् । जनकपुरबाट बुद्ध एयरको उडानमार्फत काठमाडौँ आएका रेग्मीलाई […]
September 2, 2021 admin2LeaveaComment on छोरी भन्छिन्,परीवारको खुसीका लागि म म’र्नुपर्छ,म बाँ’चेर परीवारलाई धेरै पी’डा भयो(भिडियो हेर्नुहोस्)
छोरी भन्छिन्,परीवारको खुसीका लागि म म’र्नुपर्छ,म बाँ’चेर परीवारलाई धेरै पी’डा भयो(भिडियो हेर्नुहोस् १८ वर्षकी बिनिताको सबै सपना अहिले अधुरै रहेका छन्।बाबाको २०७२ सालको भूकम्पमा परेर हात खुट्टा भाँ’चि एको यता सात वर्ष हुनै लाग्यो बिनिताको दुवै मृगौला फेल भएको पनि।बिनिया यतिबेला म’र्नु न बाँच्नुको दो’साँ’धमा बसिरहेकी छिन्।उनी भन्छिन्, बाँचेर परीवारसँग घुलमिल भएर बस्न […]